Ny ERP Ideal ho an'ny fanombohana anao | Dolibar MarketPlace
Ny ERP Ideal ho an'ny fanombohana anao
Ny ERP tsara indrindra ho an'ny fanombohana anao:
Raha manana fanombohana na orinasa vonona ny hanitatra iraisam-pirenena ianao ary tsy mbola manana vahaolana amin'ny fitantanana mitambatra, dia mila ERP na CRM structuring ianao mba hiantohana ny fitomboanao.
Ny fitomboan'ny orinasanao na ny fanombohanao dia mety hitarika fahatarana amin'ny fandefasana izay manimba ny faharetana sy ny lazan'ny orinasanao. Miaraka amin'ny fitaovana fitantanana namboarina, manana angona mazava momba ny fandrosoanao ianao, ny tetikasanao, ny tahiry, ny baiko ho avy ary azo aterina ary azonao atao ny mampifanaraka haingana ny fizotran'ny famokarana sy manitsy ny asa mba hiantohana ny fandefasana amin'ny hafanana.
Dolibarr ny ERP namboarina!
Ny fitaovana Dolibarr dia fonosana rindrambaiko fitantanana mitambatra (ERP, ERP) sy fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa (GRC, CRM) izay ahafahanao miantoka ny fitomboan'ny fanombohana anao ary miatrika fanamby sy fanamby manoloana ny mpifaninana aminao. amin'ny fiasa mahery vaika tafiditra ao anatin'ny rafitra fitantanana azy.
Raha namolavola fomba fiasa manokana manohana ny hetsika ataonao ianao, fa ireo no tena fototry ny fahombiazanao, dia hitady mpanome tolotra afaka mamakafaka ny toe-javatra misy anao sy ny tontolo iainanao ianao mba handika ny mombamomba azy ao amin'ny rafi-baovaonao. mifototra amin'ny Dolibarr ERP?
ny Dolibar Store ireo manam-pahaizana dia nanohana mpilalao tena zava-baovao nandritra ny taona maro, mitady mpiara-miombon'antoka hanohanana ny fampivoarana azy ireo amin'ny fampiharana ny ERP sy CRM open source satria Dolibarr dia eo amin'ny fizotran'ny orinasanao.
DOLIBARR STORE SERVICES CUSTOMIZED:
Raha vaovao ny asanao, mety tsy hahita vahaolana ERP eny an-tsena mifanaraka amin'ny filanao ianao, na mpanome tolotra afaka mahatakatra ny olanao? Noho ny fahafahan'ny vahaolanay sy ny serivisinay ary koa ny ekipa manam-pahaizanay, dia mahazo tombony amin'ny serivisy namboarina mba hapetraka, amin'ny hafainganam-pandehanao manokana, ny fitaovana fitantanana ilainao.
Ahoana ny fomba famelomana sy famonoana ny maody Dolibarr?Hiverina any amin'ny DolibarDolibar vs Axonaut: fampitahana, endri-javatra, fahasamihafana sy hevitra.